Point Cloud na mmekọrịta ya na Google Maps - 5 ihe di ohuru na Microstation V8i - Geofumadas
Point Cloud na mmekọrịta ya na Google Maps - 5 Kedu ihe ohuru na Microstation V8i
Ohere nke imekọrịta na Google Maps na Google Earth na ijikwa data site na nyocha bụ ụfọdụ n'ime atụmanya ngwa ngwa nke usoro GIS - CAD ọ bụla. N’akụkụ ndị a, ọ nweghị onye na-enwe obi abụọ na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ agafeela ngwa ngwa karịa sọftụwia nwere ya.
Ugbu a, m na-enyocha nke abụọ Microstation V3i Họrọ Series 8 melite (8.11.09.107), ọ dịkwa mma ịmara na enwere ọganihu. Ka anyi lee akwukwo ohuru nke biara na nke ato na nke ato:
1. Mmekọrịta na Google Maps
N'okwu gara aga m kwuru maka ya mmekọrịta na Google Earth. N'okwu a, ha agbakwunyela ọrụ ọzọ nke na-enye ohere ka echiche dgn / dwg dị ugbu a na Google Maps, na-enwe ike ịhọrọ ọkwa mbugharị ọzọ.
Emere nke a site na Ngwaọrụ> Geographic> Mepee Ọnọdụ na Google Maps
Tupu ịpị na ihuenyo windo na-ese n'elu na-egosi na anyị nwere ike ịhọrọ usoro nke ịbịaru nso, nke nwere ike isi na 1 gaa 23.
Enwere ike ịhọrọ echiche, nke nwere ike ịbụ: map, n'okporo ámá ma ọ bụ okporo ụzọ.
Ma ị nwekwara ike ịhọrọ ụdị: map, ngwakọ, enyemaka ma ọ bụ satịlaịtị.
N'ihi ya, usoro ahụ ga-emepe na ntanetị Ịntanetị, na nhọpụta nhọrọ.
Ọ bụghị ihe jọrọ njọ, mana o siri ike ịghọta ihe kpatara na ọ dịghị nfe dịka ịtinye ya dị ka akwa ọhụrụ ... n'ihe m mara, ọ bụ ihe ọzọ ha ga-eme na ụdị nke ọzọ.
2. Echekwara echiche
Ọ bụ ọrụ dịka nke mmemme CAD / GIS ndị ọzọ nwere ogologo oge, nke na-eme ka enwere ike ịchekwa nnweta nnweta kpọmkwem itinye. Nnukwu ihe dị iche na Bentley na-etinye nhọrọ nhazi echiche, ebe ọ ga-ekwe omume ịkọwapụta ọkwa nke ga-arụ ọrụ, ụdị ụdị ihe a na-ahụ anya, echiche ele, na ihe ndị ọzọ.
Ọbụna ọ ga-ekwe omume ịkọwapụta ụdị faịlụ ndị a na-akpọ akwụkwọ, na ọnọdụ ọhụụ.
3. Nkwado maka Realdwg site na AutoCAD 2013
Anyị maara na na 2013 AutoDesk gbanwere faịlụ ahụ, nke ga-adị irè maka AutoCAD 2014 na AutoCAD 2015.
Microstation Họrọ 3 XNUMX nwere ike imeghe, dezie ma chekwaa ụdị faịlụ ndị a.
Na nke a, nkwekọrịta nke AutoDesk abụrụla ezigbo ihe, nke OpenSource niile enweghị ike ịkwagide. Ọbụghị ibubata, obere obere idezi edezi.
4. Point Cloud Nkwado.
Nke a bụ atụmatụ malitere na Họrọ Usoro 2. Ọ bụ ezie na na mbipụta ọhụrụ ahụ, ha agbakwunyela ndozi ojiji.
Enwere ike ichikota ihe na usoro:
TerraScan BIN, Topcon CL3, Faro FLS, LiDAR LAS, Leica PTG - PTS - PTX, Riegl 3DD - RXP - RSP, ASCII xyz - txt, Optech IXF, ASTM e57 na n'ezie, Akwukwo POD, nkà na ụzụ nke o nwetara nke a mgbe ọ nwetasịrị ya n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
5. Nkwado maka mmepe na gburugburu omume ọma.
Ntuchi njikorita nke njirimara bụ ihe na-adịbeghị anya, mana ọ na-arụ ọrụ dị ka anyị nwere ugbu a njikwa dị mma karịa njikọ nke ntụkwasị obi na ịbịarị.
Na nke a, ọ ga-ekwe omume maka sava dị iche iche ịkekọrịta usoro, na-ebufe oge mmeghe ma kesaa ikike na sava ndị ọzọ na-enweghị ahụ dịka 10 afọ gara aga. Ya mere, ọrụ dị ka ihe GeoWeb Publisher ma ọ bụ Geospatial Server na-eme nwere ike ịbụ igwe ojii nke sava, na-enweghị atụ egwu saturation ma ọ bụ mkpa ọ dị inwe naanị n'ihi oke ibu nke usoro oge ochie gosipụtara.
N'ozuzu ya, anyị na-ahụ akwụkwọ ọhụụ nke Microstation V8i nke na-atọ ụtọ na usoro nke atọ ya. Agbanyeghi na akụkụ ụfọdụ nke nsogbu nsogbu ụwa na-adị nwayọ nwayọ karịa ike OpenSource, n'ogo nke ngwa kwụ ọtọ na injinia ụlọ ọrụ mmepụta ihe na injinia injinịa ọ na-aga n'ihu na-abụ akara ngosi dị mkpa iji mepụta ihe ọhụrụ.
Previous Post«Previous N'ịbụ topographer, ọ bụ ahụmahụ maka ndụ
Next Post XVI Congress nke Geographic Ozi TechnologiesNext »